Fiafaran’ny fe-potoana iasana :: Mbola hikarakara fifidianana alohan’ ny oktobra 2021 ny CENI ankehitriny • AoRaha
Fiafaran’ny fe-potoana iasana Mbola hikarakara fifidianana alohan’ ny oktobra 2021 ny CENI ankehitriny
Hifarana amin’ny volana oktobra 2021 ny fe-potoam-piasan’ireo mpikambana maharitra eo anivon’ny Vao­miera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Mila fidiana alohan’io fotoana io ireo mpikambana vaovao handrafitra an’ity rafitra mpika­rakara fifidianana ity. Dingana maro no arahina amin’izany, araka ny fanazavan’i Fano Rakotondrazaka, mpampaka-tenin’ny Ceni, tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Hatreto aloha, mbola ireo mpikamban’ny Ceni amin’ izao fotoana izao ihany no hikarakara ny fifidianana mety hatao alohan’ny oktobra 2021. Anisan’ny asa farany hiandraiketan-dry zareo, raha hotanterahina amin’ity taona ity ihany, ny fifidianana loholona. Raha toa kosa ka amin’ny herintaona mihitsy vao hatao io fifidianana io dia izay mpi­kambana vaovao eo no hika­rakara izany.
“Mpikambana miisa sivy, ahitana solontena voafidy iray avy amin’ny Fitsarana Tampony, Antenimierandoholona sy
Antenimierampirenena, Fitsa­rana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), Holafitry ny mpisolovava, Holafitry ny mpanao gazety ary solontena roa avy amin’ireo Fiarahamonim-pirenena, no mandrafitra ny Ceni, araka ny voafaritry ny lalàna laharana 2015-020. Tendren’ny Filoham-pirenena kosa ny mpikambana iray hafa”, hoy izy.
Fantatra fa enimpolo andro alohan’ny hijanonan’ireo mpikambana am-perinasa no mandefa ny taratasy fana­sana hifidy solontena vaovao any amin’iretsy rafitra voata­nisa tetsy ambony iretsy ny Ceni. Fito andro aorian’ny naharaisana ny fanasana kosa no mandefa ny fitanana an-tsoratra mikasika ny vokatry ny fifidianana any amin’ny Filoham-pirenena ireo rafitra isan-tsokajiny ireo. Amin’ny alalan’ny didy hitsivolana, avy eo, no handraisan’ny Filoha ny fanapahan-keviny. Aorian’ny fahalanian’ireo mpikambana maharitra vaovao ao amin’ny Ceni no hatao eny anivon’ ny Fitsarana Tampony ny fianianana. Tapa-bolana aorian’ny fandraisana ny asa indray no hanaovana ny fanambaràm-pananana eny amin’ny HCC. Tsara ho fantatra fa enina taona tsy azo havaozina no fe-potoam-piasan’ireo mpikambana
maharitra hofidiana ireo.
Fitakiana – Ministeran’ny fanabeazana Hanao fitokonana fanairana ireo mpampianatra sy mpiasa
Tombana amin’ny asan’ny governemanta :: “Mbola tsy tratra ny tanjona”, hoy ny praiminisitra